I-CNC Turning (2-12 Axis) - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Precision Machining Inikeza izingxenye zomshini zokuguqula i-CNC ezinokubekezelela okuqinile. Amabha ayindilinga aluhlaza angakhiqizwa kusuka ku-1mm kuye ku-300mm. Njenge-ISO9001: 2015 ne-ISO / TS 16949: 2009 inkampani ekhiqiza izingxenye ze-CNC, asigxili ekukhiqizeni kuphela kepha futhi sinikeza nezingxenye ezisezingeni eliphakeme ze-CNC.
Akunandaba ukuthi imikhiqizo iyinkimbinkimbi noma inkulu kangakanani, onjiniyela bethu abanamakhono bayakwazi ukuyikhiqiza ngokunemba nangekhwalithi efanayo. Konke okulindele kumshini wakamuva we-CNC Turning ungenziwa yi-K-Tek Machining Co., Ltd.
Ngokusebenzisa i-CNC Turning Technology yakamuva, ekhiqiza ngemishini ezishintshayo, ukwehluka kungancipha futhi kulawulwe kude kakhulu.
Kuyini i-CNC Turning?
I-CNC ilawulwa yikhompyutha, ifakwe uhlelo lokulawula ithuluzi lokuzenzekelayo. Izinto eziyindilinga zigcinwe ku-chuck futhi zijikeleziswa ukususa okokusebenza ukuthola izingxenye. I-CNC evula hhayi kuphela engakhiqiza umbuthano wangaphandle, nayo ingasetshenziselwa umbuthano wangaphakathi (okungukuthi, ukubhola) ithubhu ukuthola izinhlobo ezahlukahlukene.
Sinemishini yokuguqula ye-CNC kokubili ukukhiqizwa kwevolumu okuncane nokukhulu okunekhono lokukhiqiza izingxenye ezinemba kakhulu ukusuka ku-1mm ubukhulu kuye ku-300mm ubukhulu. Iningi lemishini yethu yokuguqula i-CNC ifakwe okokuphotha okwengeziwe kanye namathuluzi okusiza ukwenza imishini ezenzakalelayo yezingxenye eziyinkimbinkimbi kunqubo eyodwa ukuqeda ukuphatha okubizayo.
• Ukuzungeza nokunemba kokugxila kungafinyelelwa ku- +/- 0.005mm
• Ubukhulu be-Surface bungafinyelelwa ku-Ra0.4.
• Ububanzi bezinto zokusetshenziswa eziyibhilidi eziyindilinga ezisuka ku-1mm kuye ku-300mm
• CNC turning, turning-futhi-Milling machining amaningi
• Izinsimbi ze-alloy, Insimbi engenasici, i-Brass, i-Aluminium kanye namapulasitiki.
• Amaqoqo amavolumu amancane namakhulu.
I-K-Tek ingenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokwezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Sidlulise isitifiketi se-ISO9001: 2015, okwamanje sinabasebenzi abangama-200. Umkhiqizo wethu uthunyelwa eJapan ngama-20%, ama-60% athunyelwe eYurophu naseMelika, singakunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana. Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy, Singabuye sinikeze ukwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende:
Ukwelashwa kwethu ebusweni kufaka: